Faahfaahin: Qarax Lalal Beegsaday Shaqaale ka tirsan UK-ka Puntland ee Garowe[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Faahfaahin: Qarax Lalal Beegsaday Shaqaale ka tirsan UK-ka Puntland ee Garowe[Sawirro]
Magaalada Garoowe ee caasimadda Dawladda Puntland ayaa abaare 8:00 subaxnimo ee saaka waxaa qarax ka dhex qarxay Gaari Bus ah oo ay saarnaayeen shaqaale katirsan Qaramada Midoobay isuguna jiray Ajanabi iyo
Soomaali, gaariga ayaa qarxay xili uu shaqaale kale ka qaadayey afaafka hore ee xarunta Hay’adda FAO .
Qaraxa waxaa uu sababay dhimashada 7-qof , shan kamid ah waa shaqaalaha Qaramada Midoobay , labana waxaa ay katirsan yihiin ciidanka ilaalada Hay’addaha caalamiga ah ee SPU , dhaawacuna waa 6-qof labo kamid ah iyana
waa shaqaalaha UN-ka, dareewalkii gaariga waday iyo saddex askari oo ciidamada SPU ah.
Taliyaha Ciidanka Booliska gobolka Nugaal Axmed Cabdillaahi Samatar Layli oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in baaritaan ay sameeyeen ku ogaadeen in qaraxau Ismiidaamin yahay.
Axmed Cabdillaahi Samatar Layli ayaa sheegay in qofka Ismiidaamiyey kamid yahay dadka gaariga baska ah saarna ayna hayaan jirkiisa oo goo go’ay ,mana uusan cadeyn in qofka kamid yahay shaqaalaha UNka.
Taliyaha Ciidanka Booliska gobolka Nugaal ayaa sheegay iney baaritaan ku wadaan sababta qaraxa ka danbeysay iyo qaabka ay u suurtagashay sida ugu dhakhsiyaha badana usoo bandhigayaan.
Qaraxan ayaa noqonaya midkii ugu horreeyey ee lala beegsado shaqaale Qaramada Midoobey ah Puntland lamana yaqaan ilaa hada qaabka bambada loogu xiray gaarga.